प्रदेश नं १ को नाम र केन्द्रको विषयमा भित्री कुरा ! - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
प्रदेश नं १ को नाम र केन्द्रको विषयमा भित्री कुरा !
‘कोशी’ या ‘सगरमाथा–किराँत’
सुमेरु संबाददाता १८ बैशाख २०७६, बुधबार १५:०५
लामो समय देखि टुंगो लगाउन नसकिएको प्रदेश नं १ को केन्द्र र नामांकनको विषयमा निर्णायक छलफलका लागि नेकपा भित्र रस्सा–कस्सी चलिरहेको छ । धनकुटामा सम्पर्क राजधानी तोकेको प्रदेशले वैठकमा औपचारिक रुपमा विहिबार प्रस्ताव पेश गर्दैछ । वैठक विहान ११ बजेको लागि बोलाईएको छ ।
केन्द्रको विषयमा दुई विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । विराटनगर की ईटहरी भन्ने विषय टुंगो लाउन खास समस्या नभएको प्रदेश नं १ का एक सांसदले भने, ‘असहमतिको विषय भनेको नाम नै हो । धेरै नामहरुमा छलफल भईरहेको छ । सहमति जुटेको छैन् ।’
स्रोतका अनुसार नेकपाको केन्द्र नेतृत्वले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ सिफारिस गरेको छ । तर प्रदेश तहमा ‘सगरमाथा’ राख्नुपर्ने मत बलियो देखिएको छ । दोस्रो मतको रुपमा प्रदेशको नाम ‘किराँत’ राख्नुपर्ने रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
सगरमाथा र किराँत राख्नुपर्छ भन्नेहरुले ‘सगरमाथा–किराँत’ या ‘किराँत–सगरमाथा’ राख्न सहमत जस्तै देखिएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । तर नेकपा केन्द्रको सिफारिसको आधारमा पाटीमा हिृवप जारी भए प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नभए ‘सगरमाथा–किराँत’ या ‘किराँत–सगरमाथा’मध्ये एक हुनसक्ने संभावना बढेको छ ।
केन्द्र ईटहरी नै हुनसक्ने संभावना बढेकाले सहमति नभए नामांकनको विषय अझ लम्बिन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ । उता, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि सगरमाथा र किराँत दुवैमा सहमति दिईसकेको दाबी गरिएको छ ।
सुखद खबर : बेलिब्रिजको काम युद्धस्तरमा, दुर्गम भनिएको क्षेत्र सुगम बन्दै